Indawo ethandekayo yeeholide eTver
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguДмитрий
Ukuza e-Tver kuhambo lweshishini okanye uhambo nje, qesha amagumbi ethu omoya kwaye uzive ukwimo epholileyo kwindawo yentaka yeliso)
Esi sisithili saseMoscow sesixeko - i-treasure trove yeendawo zoshishino eTver:
-Indlela elula yokuphuma ukuya eMoscow;
-Ukuya kumbindi wesixeko - imizuzu eyi-10 ngezothutho;
-Ts "Metro" kwimizuzu emi-2 yokuqhuba okanye imizuzu emi-5 ngeenyawo;
-Ungaya ngokulula naphi na esixekweni;
Thenga ngaphaya kwendlu ukusuka kwindlu;
Nceda ufunde inkcazo eneenkcukacha, zininzi izinto ezinomdla! 👍😉
Isiqinisekiso sokhuseleko lwakho: Ummandla wendlu ugadwe ngabasebenzi benkampani yabucala yokhuseleko, iRos Guard, i-video surveillance ejikeleze umjikelezo; Sihlamba ilinen kunye neetawuli emva kondwendwe NGALUNYE. Kuhlala kukho ilinen eyongezelelweyo, xa kunokwenzeka. Uhlobo lwendlu yestudio:
Kwigumbi lokulala elipholileyo uya kufumana i-sofa enkulu egotyiweyo enokuthi isetyenziswe njengendawo yokulala okanye njengendawo yokuphumla;
Nawe kukho umandlalo osongwayo;
Indawo yokutyela (ekhitshini): Indawo epholileyo, enomoya apho ungalungisa khona isidlo sasemini okanye ubukele imuvi yangokuhlwa okanye usebenze kwilaptop yakho okanye ube nekomityi yekofu. Sikulungiselele iti, ikofu kunye neziphatho ezincinci.
Kubahambi bezoshishino, iphakheji epheleleyo yamaxwebhu okuvala ingxelo ilungiselelwe (itshekhi enekhowudi ye-QR, isenzo esinesitywina kunye nesiginitsha),
Iziseko ezigqwesileyo zesithili: Esi sisithili saseMoscow sesixeko - indawo yokugcina indawo yoshishino yaseTver: Ukuphuma ngokufanelekileyo ukuya eMoscow, kumbindi wedolophu kunye nezinye izithili; -Iziko lokuthenga "iRio" ngemizuzu emi-5 ngemoto okanye unokuhamba ngemizuzu engama-20; - Iziko lokuthenga "Metro" kwimizuzu emi-2 yokuqhuba okanye imizuzu emi-5 ngeenyawo;
- Kwindlu elandelayo yivenkile yePyaterochka
-Ungaya naphi na esixekweni ngaphandle kweengxaki.
-Indawo yokupaka elula kwindawo yendlu (sikhupha isilawuli kude ukusuka esangweni okanye uqhagamshele iselula yakho)
NCEDA UFUNDE IMITHETHO YETHU YOKUHLALA: - Ixesha lokungena: ukusuka kwi-14.00 ukuya kwi-00.00 - Ixesha lokuphuma kude kube yi-12.00 (emini) ️Iimeko zomntu ngamnye zokungena kunye nokuphuma zinokwenzeka. Indawo yokuhlala kunye nezilwanyana ezifuywayo "ngesicelo", ithuba lokuhlala kunye nesilwanyana sakho, jonga kunye nam - bhala kwingxoxo okanye ufowunele kwisibhengezo. Enkosi) Imisitho AYIbonelelwanga
26" HDTV ene-izitishi zeTV eziqhelekileyo
Ndivuleleke kunxibelelwano. Bhala, ufowunele, uthumele imiyalezo ye-audio. Njengoko uthanda👍 Ngaliphi na ixesha lemini, ndinxibelelana (ebusuku kungcono ukufowuna, kuba ndingeva isandi sesaziso).
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tver